DAAWO WAREYSI: Madaxweyne Waare oo shaaciyay waxa uu ku badashay kursigii Hiiraan! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO WAREYSI: Madaxweyne Waare oo shaaciyay waxa uu ku badashay kursigii Hiiraan!
DAAWO WAREYSI: Madaxweyne Waare oo shaaciyay waxa uu ku badashay kursigii Hiiraan!
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxamed Cabdi Waare, Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya siiyay Warbaahinta Hanoolaato ayaa waxa uu ka dhawaajiyay arrimo badan oo xasaasi ah.
Haddaba halka hoose ka Daawo Wareysi oo dhammeystiran:
Maxaad ku badashay Waare Kursiga Hiiraan